नजिकमा स्तरिय सेवा पाउँदा प्रफुल्ल श्रीबास्तव « Farakkon
नजिकमा स्तरिय सेवा पाउँदा प्रफुल्ल श्रीबास्तव
तुलसीपुर, फागुन १४ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ निवासी ज्योति श्रीबास्तव बुधवार निकै खुसी थिइन । अस्पताल बाट डिस्चार्ज भएर नव जात सिशुसहित सकुशल घर जान पाउँदा जो कोही आमाहरु खुसी हुन्छन् । आफ्नै ठाउँमा स्तरिय सेवा पाउँदा धेरै तनावहरु सल्टाउन सहजहुन्छ ।
भिडियो एक्सरेको रिपोर्टले उनको बच्चा उल्टो देखाएको थियो । चिन्ता र आशंकाका बीच श्रीबास्तव तुलसी हस्पिटल पुगिन । हस्पिटल प्रशासनले श्रीबास्तवलाई विश्वास दिलायो । भन्यो –‘बाहिर कतै जानु पर्दैन।’ तैपनि मन न हो, चिन्ता भइहाल्छ नै । श्रीवास्तवको मनमा पनि त्रास कायमै थियो । प्रस्तुतीको समय हरेक आमालाई त्रास हुनु स्वाभाविक हो ।
तुलसीपुरको तुलसी हस्पिटल प्रालिले फागुन ७ गतेदेखि मात्रै प्रसुती सेवापनि दिन सुरु गरेको थियो । जहाँ एनआईसियू सेवापनि छ ।
विश्वास सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । श्रीबास्तवले पनि तुलसी अस्पतालाई विश्वास गरिन । अन्त कतै प्रसुतीका लागि गइनन् । गत आइतवार डा.शेखर थापा र वालरोग विषेशज्ञ डा. किसोर खत्रीसहितको टिमले सफल अप्रेशन गरेर बच्चा निकाल्यो । बल्ल उनी ढुक्क भइन ।
‘अप्रेसन गरेर बच्चा निकाल्न नसकेको भए आमा र बच्चाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्थ्यो,’ डा.खत्रीले भने– ‘त्यो जटिल केस नै हो। हामी सबै कुराले प्रफेक्ट रहेको हुँदा ढुक्कले सफल अप्रेसन गर्यौं।’
आफ्नै सहरमा सेवा सुविधा पाउँदा श्रीबास्तव र उनका परिवार मात्रै खुसी थिएनन् जटिल मानिएको केसमा सफल अप्रेसन गर्न सकेकोमा अस्पतालका डाक्टरपनि उत्साहित देखिन्थे ।
‘नजिकै सेवा पाउँदा खर्च बच्यो,’ श्रीबास्तवले भनिन् ‘ अब प्रसुतीकै लागि कुनै महिलालाई पनि जिल्ला बाहिर जानु नपरोस ।’ साँझ विहान घरको रेखदेख गरेर परिवारका सदस्य आफ्नो हेरचाहामा आएको हुँदा मनोवल बढेको श्रीबास्तवले बताइन ।